Cawbird, yakanakisa Twitter mutengi weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe wanga uri mune iyo Linux ecosystem kwenguva yakareba, zvirokwazvo iwe unorangarira Corebird.
Asi zvinowanzoitika musoftware yemahara, hapana chinoenda zvachose uye muzviitiko zvakawanda, pane mugadziri anoda kuenderera nerwendo.
Mune ino kesi, ndeye IBBoard mushambadzi akagadzira vhezheni yeCorebird inonzi cowbird iyo inoshanda neazvino Twitter API.
Corebird yaive yakagadzirirwa-mushe, yakachengetedzwa-zvakanaka, uye yakasarudzika-muchengeti mutengi, yakavakirwa paGTK, asi ichidikanwa nevashandisi veese magiraidhi uye distros.
Mutengi akabvumidza iwe kuti uite zviito zvekutanga zveTwitter; tweet, retweet, kurodha mifananidzo, kutumira uye kugamuchira yakananga mameseji, tevera, rega kutevera, kurambidza uye block maakaunzi. Pamusoro pezviito zvemberi sekurega iwe uchinja ma hashtag akasarudzika uye chinja pakati pamaakaundi.
Tsigiro yakatowedzerwa kumakumi maviri nesere emavandudzo emhando anotarisirwa nevashandisi vazhinji Corebird yakagadzirwa kuratidza maTweets achangoburwa kutanga uye hazvishande kana iwe uchida kuratidza "maTweets akakosha kwazvo".
Cawbird inoita zvese izvi, asi inozviita neimwe nzira. MuCawbird hapana kutenderera kwetweets munguva chaiyo, maTweets haaratidzike chaizvo kana aburitswa, pachinzvimbo, iko kunyorera kunofanirwa kutarisa nhau maminetsi maviri ega ega, kana kana mushandisi akamisa bhuku rekuvandudza.
Iko kunyorerawo kunogumira mune kangani iyo iyo yakagadziridzwa, saka kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuvandudzwa nguva zhinji nguva zhinji, uchafanirwa kuvhurazve iko kunyorera nguva nenguva.
Kana iwe uchida kuisa Cawbird pane yako kifaa nzira yakanakisa yekuzviita iri kuwedzera iyo repository kune ako masosi, saka iwe unogona kumisikidza nekugadzirisa mutengi otomatiki uchishandisa iyo yekuvandudza nzvimbo yekugovera kwako.
Iwe unogona zvakare kukopa iyo .deb installer kubva ku Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Cawbird, yakanakisa Twitter mutengi weLinux